हरिको कठोर सङ्घर्ष
२०७६ मंसिर १४ शनिबार ०९:३३:००
पाखो खेतबारी त बाउले जोडिदिएकै थिए । तर हरि हुमागाईं बसेनन् । खेतबारी जोतेर हैन जोताएरै पनि जीविका राम्रै चल्थ्यो । तर हरिले आफ्नो सङ्घर्षको यात्रा आफैं तय गरे । चाहेको भए सुखैसुखको जिन्दगी भोग गर्न सक्थे । तर खुसीखुसी उनले दसनङ्ग्रा खियाउन रुचाए ।
उमेर १५ वर्ष । उनलाई जागिर खान मन लाग्यो । घरबाट अनुमति पाइँदैनथ्यो । भागे । गाउँकै साथीसँग काभ्रे कुशादेवीका हरि काठमाडौं आए । बालकै थिए । हातमा सीप थिएन । पकनाजोलको एक होटलमा भाँडा माझ्न थाले । खानेबस्ने सुविधा थियो । तलब डेढ सय । नचिनेको ठाउँ, नगरेको काम । कहाँ थियो र सजिलो ?
पकनाजोलपछि थापाथली, मैतिदेवी, नयाँबानेश्वरका होटलमा काम गरे । “पढ्नको दुःख र जागिरको लोभले घर छोडियो । तर किन हुन्थ्यो र सजिलो,” हरि भन्छन्, “ट्वाइलेटमा गयो । मज्जाले रोयो । मन अलि हलुङ्गो हुन्थ्यो । अनि फेरि भाँडा माझ्न थाल्यो ।”
दुई वर्षमा घर फर्किए । बुवाले पढ्न दबाब दिन्थे । त्यहीबेला कलङ्कीमा घरको काम गर्ने, पढ्न पनि दिने, तलब पाँच सय रुपैयाँ हुने खबर पाए । फर्किए हरि ।
काम गर्दाको दुःखको अग्लो पहाड थियो । तर पैसाले त्यो दुःख बिर्साइदिन्थ्यो । “कलङ्कीमा काम गरेर एकपटक घर फर्किंदा सात सय रुपैयाँ पाएको थिएँ,” हरि पैसाले दिएको खुसी सुनाउँछन्, “त्यो सात सय रुपैयाँ घर जाँदा मन लागेजति खर्च गर्दा पनि सकिएन । काठमाडौं आउँदा पनि बाँकी थियो ।”
कलङ्कीमा हरि जुन घरमा बस्थे त्यही घरमा फूलको काम गर्ने एकजना दाइ थिए । उनले भन्थे– “म त हिरो रमेश उप्रेतीको घरमा काम गर्छु ।” हिरो/हिरोइनको स्टारडम भएको समय थियो । हरि उनका कुरा सुनेर लोभिन्थे । र, भन्थे– “मलाई पनि भेटाइदिनु न दाइ, भेट्ने मन छ ।”
मामा (नारायण तिमलसेना) गौरीशङ्कर धुजुको स्पट ब्वाइको रुपमा काम गरिरहेका रहेछन् । चलचित्र थियो– ‘मुनामदन’ ।
हरिका दाइ (राजन हुमागाईं) मामाको पछि लागे । असिस्टेन्ट कुकको रुपमा । हरि दाइको पछि लागे । काम भाँडा माझ्ने नै थियो । ०५८ सालको समय ।
‘मुनामदन’मा पहिलोपटक छायाङ्कनका लागि हरि बालाजु एनएफडीसी स्टुडियो पुगेका थिए । एउटा गाडी, थुप्रै क्रु मेम्बर । गाडीको ढोकामा झुण्डिएर एनएफडीसी पुगे ।
हिरो–हिरोइनलाई देख्ने र भेट्ने लोभले हरि चलचित्रको सुटिङ युनिटमा मिसिएका थिए ।
तर विडम्बना !
हरि एनएफडीसीको गेटमा जान्थे, हिरो÷हिरोइनलाई हेर्न । ढोकामै छेक्थे, सुरक्षा गार्डले । अमिलो मन बनायो, दिनभरि भाँडा माझ्यो । त्यसैगरी बित्यो हरिको पहिलो दिन ।
कुशादेवीबाट काठमाडौं आउँदा न्युरोडमा साथीसँग भेट भयो हरिको । नाङ्लोमा डोनट बेच्थे उनी । त्यही काम केही दिन हरिले पनि गरे । त्यही साथीले हो, पहिलोपटक उनलाई चलचित्र देखाएको । चलचित्र भन्ने उनलाई थाहै थिएन । साथीले जाऊँ भने ।
कस्तो हुँदोरहेछ, हेरौैं न त ! हरि पछि लागे ।
हरिलाई कुमारी सिनेमा हल लगे । चलचित्र रहेछ, ‘दिल तो पागल हे’ ।
पहिलो दिनको याद– झ्यालको सानो प्वालबाट साथीले पैसा दियो । भित्रबाट कागजको सानो चिर्कटो आयो । त्यही चिर्कटो गेटमा देखाएर साथीसँगै हरि भित्र पसे । सिटमा सबै बसे । उसैगरी हरि र उनको साथी पनि बसे । एकछिनमा झापझुप बत्ती निभ्यो । चुक घोप्ट्याएजस्तो अन्धकार भयो । हातमा टर्चलाइट बोकेर दुई–तीनजनाले ढिलो आउनेलाई भित्र ल्याएर सिट देखाइदिए । केही समयपछि पर्दामा अक्षरहरु आउन थाले । ठूलो आवाज आउन थाल्यो । बडेमाका मान्छेहरु पर्दामा देखिन थाले । करिब तीन घण्टापछि चलचित्र सकियो ।
चलचित्र भनेको त यस्तो पो हुँदोरहेछ ! जति रोमाञ्चित बनायो, त्यति नै आश्चर्यचकित पनि । त्यो रङ्गीन सम्झना हरिको मथिङ्गलबाट आज पनि ओझेल परेको छैन ।
उनलाई पहिलोपटक हेरेको नेपाली चलचित्र पनि याद छ, ‘सीमारेखा’ ।
‘दिल तो पागल हे’ त हेरे । तर भाषा थियो हिन्दी । कति नै बुझे र ? भिजुअल हेरे । चित्त बुझाए । जब उनले ‘सीमारेखा’ हेरे त्यसबाट उनले बुझे खासमा चलचित्र ।
चलचित्रले मन खिचेको थियो । तर सङ्घर्षको पहाडले थिची नै रहेको थियो । मन लाग्दैमा कहाँ जुथ्र्यो र चलचित्र हेर्ने अवसर ? महिनौं कुर्नुपथ्र्यो चलचित्र हेर्न जान ।
‘मुनामदन’मा उनी चार–पाँच दिन सुटिङ बाँकी छँदा पुगेका थिए । होटल र घरमा बसेर काम गरिरहेका गाडी चढेर नयाँनयाँ ठाउँ जान पाइने । हिरो–हिरोइनलाई देख्न पाइने, खुब रमाउँथे । “केटाकेटी उमेर थियो । जाडोमा कट्टु र चप्पलमै हिँड्दा पनि रमाइलो लाग्थ्यो,” हरिले पुराना दिन सम्झिए ।
‘मुनामदन’को छायाङ्कन सकियो । उनले त्यसमै काम गर्ने हेड कुकलाई भनेका थिए, “अर्को चलचित्रमा मलाई पनि बोलाउनु ल ?”
फुक्काफाल भएर बसिरहेका बेला नभन्दै उनलाई बोलाइयो । चलिचत्र रहेछ ‘धनसम्पत्ति’ । काम भाँडा माझ्ने नै थियो ।
चलचित्र बन्ने क्रम बाक्लियो । हरिको मेहनत देखेर उनको मूल्याङ्कन भयो । शिशिर रानाले मसँगै काम गर भने । ‘पङ्क्षी’बाट उनी स्पटब्वाई भए । ‘आतङ्कवादी’, ‘भन्नै सकिनँ’लगायत थुप्रै चलचित्रमा उनले यही काम गरे ।
स्पटब्वाईपछि शिशिरको असिस्टेन्ट भए । एक स्टेप माथि उक्लिए । चलचित्र ‘बसन्त ऋतु’बाट लाइटम्यान भए । एक खुट्किलो त उक्लिए, तर त्यही चलचित्र उनका लागि अभिशापसरह बन्यो ।
थापाथली पुलमुनि चलचित्रको छायाङ्कन चलिरहेको थियो । पहिलोपटक लाइटम्यान भएका हरि । लाइटको काम गरिरहेका थिए । करेन्ट लाग्यो ।
वीरहस्पिटल पु¥याइएछ उनलाई । हेरेर डक्टरले भने, ‘हि इज अलरेडी डेड ।’
हरिलाई लिएर गएका राजकृष्ण महर्जनले डाक्टरले ‘चेकअप’ नै नगरी मरिसक्यो भनेपछि आफ्नो रिस थाम्न सकेनछन् । ‘हेर्दै नहेरी मर्‍यो भन्छस्’ भन्दै डाक्टरमाथि नै हातपात गरेछन्, हरि सुनाउँछन् ।
चार दिन हस्पिटल बस्दा हरिलाई भेट्न राजेश हमाल, जल शाहलगायत पुगेका थिए । हरिलाई याद छ, चलचित्र युनिटले आठ हजार रुपैयाँ खर्च दिएको थियो । त्यो रकम उपचार गरेर केही उब्रिएको पनि थियो । ज्यान त बच्यो हरिको, तर अझै पनि कहालीलाग्दो त्यो घटनाका प्रमाण बोकेर हिँडिरहेका छन् उनी । हातको एउटा औंला सोझो हुँदैन । केही खतहरु छन् । तर पनि त्यसले उनलाई केही समयबाहेक रोक्न सकेन । काममा फर्किए ।
शिशिरले किशोर कार्कीलाई भन्दिए, “यो भाइ राम्रो काम गर्छ, तिम्रो टिममा राख ।” किशोरले उनलाई लिए । असिस्टेन्ट क्यामेराम्यानको जिम्मेवारी दिए । तर त्यो मात्रै उनको जिम्मेवारी थिएन । स्पट, लाइटदेखि क्यामेरा असिस्टसम्म उनकै जिम्मा थियो ।
किशोर र शिशिरसँग विज्ञापनको काम गर्न थाले हरि । त्यहीबेला उनले धेरैलाई चिने । धेरैमाझ उनले मेहनतीको छवि बनाए । धेरैसँग काम पनि गरे ।
धीरजजङ्ग शाहले उनलाई भने, “तिमी स्पट, लाइट, क्यामेरा असिस्ट सबै काम गर्छौ, तिम्रै कारणले सबैको काम सजिलो भइरहेको छ । पारिश्रमिक बढाऊ ।”
पाँच सय रुपैयाँ पाइरहेका उनले ३५ सय रुपैयाँ पाए । छ दिन काम गरेको पैसा एकैदिन आउन थाल्यो ।
पैसा त हरिले बढाए । तर केही महिना उनलाई धीरजले बाहेक कसैले काम दिएन । धीरजले महिनामा चार–पाँचवटा विज्ञापनको काम लिन्थे । त्यसमा हरिलाई लिन्थे । त्यसबाटै उनको खर्च चलिरहेको थियो ।
चार महिनापछि हरिलाई सबैले बोलाउन थाले । दिनको ३५ सयमा हरि काम गर्न थाले । पाँच सयमा काम गर्ने हरिले दिनकै ३५ सय रुपैयाँ कमाउन थाले ।
दुई वर्षपछि सिमोस सुनुवारसँग भेट भयो । उनीसँगै काम गरे हरिले । रियाज म्युजिकले भिडियो बनाउँथ्यो, त्यसको प्रोडक्सनको हरिले हेरिदिन्थे ।
त्यही समय चलचित्र ‘मिसन पैसा’मा सिमोसले काम गर्ने भए । उनले हरिलाई असिस्टेन्ट क्यामेराम्यान र प्रोडक्सनको जिम्मा दिए । पुनः चलचित्रमा फर्किए हरि । रोशन श्रेष्ठ क्यामेराम्यान थिए । पहिलो सेड्युल सकिएपछि उनी बाहिरिए । सिमोसले हरिलाई भने, “तेरो लाइट राम्रो छ । फोकस आउटबाहेक जे खिच्छस् खिच्, म लिन्छु रिस्क । नभन्दै चलचित्र राम्रै भयो ।”
सिमोस त्यो बेला चलचित्रमात्रै होइन म्युजिक भिडियो र विज्ञापन पनि धेरै नै बनाउँथे । उनले हरिलाई छोडेनन् । एकवर्ष उनीसँगै काम गरे हरिले ।
‘भुल भए माफ गर’, ‘युगदेखि युगसम्म’, ‘फस्ट लभ’, ‘होस्टल’, ‘होस्टल रिटन्र्स’, ‘डन्डिबियो’, ‘छ माया छपक्कै’ लगायत दुई दर्जन चलचित्र उनले खिचे ।
शिशिर, सिमोस र आशिफ शाहसँग उनले लगातार काम गरे । हरिले सुरुसुरुमा आशिफको केही म्युजिक भिडियो खिच्ने क्रममा बिगारे पनि । तर उनले मेहनती र इमानदार छ, काम गर्दा बिग्रिहाल्छ नि भनेर एक्सक्युज गरे । त्यो गुन हरिले अहिलेसम्म भुलेका छैनन् ।
कोसँग काम गर्ने र कोसँग नगर्ने भन्दाभन्दै टिम आफैं बन्न थाल्यो । चाहे चलचित्रमा होस् या म्युजिक भिडियो अथवा विज्ञापनमा होस् ।
विज्ञापन बनाइरहेको टिमले निर्णय गर्‍यो, चलचित्र निर्माण गर्ने । चलचित्रको कथादेखि कलाकारसम्म तय भयो । जब चलचित्र फ्लोरमा जाने बेला भयो, त्यहीबेला विज्ञापनको फ्लो बढ्यो । प्रवीण मानन्धरले निर्देशन गर्ने भए । तर पछि उनले भने, “म तिमीहरुलाई साथ दिन्छु, तर निर्देशन गर्दिनँ ।”
छेतेन गुरुङलाई पनि प्रस्ताव गरे । अरु पनि केहीलाई भेटे । कोही चाहेर पनि काम गर्न नसक्ने, कोही नगर्ने ।
कसलाई निर्देशन गराउने ?
स्क्रिप्टमा नबसेको निर्देशकलाई कथाको अन्तर्वस्तु थाहा हुँदैन । एक्सन र कट भन्न मात्रै निर्देशक भित्राउनुभन्दा हरि नै निर्देशन गर, उनको समूहले भन्यो । हरिले नाइँ भन्न सकेनन् । र, चलचित्र ‘सरौंतो’ तयार भयो ।
अहिले नेपाली बजारमा निर्माण भइरहेका करिब ८० प्रतिशत विज्ञापन हरिले नै खिचेका छन् । चाहे नेपाली ब्रान्ड होस् वा मल्टिनेसनल कम्पनीको डबिङ विज्ञापन होस् ।
एसियन पेन्ट्स, मनीषा कोइरालाले खेलेको एनआईसी एसिया बैङ्कको विज्ञापन, बर्जर पेन्टस्, अनमोल केसीले खेलेको स्प्राइट, डाबर, हर्बलका विज्ञापन, महिन्द्रा रोडिज होस् अथवा हुन्डाइको नेपालको कपी विज्ञापन हरिले नै खिचेका हुन् ।
बुवाले छोराहरुले दुःख पाउलान् भनेर जोडिदएको जग्गामा उनले आँखा लगाएनन् । आफैं कमाए । चलचित्र, म्युजिक भिडियो र विज्ञापनमा काम गरेर उनले काठमाडौंमा घर जोडे, गाडी किने । एउटा चलचित्र तयार पार्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण इकुपमेन्ट अहिले हरिसँग छ । चलचित्र, म्युजिक भिडियो र विज्ञापनमा प्राविधिकको काम गरेर घर गाडी जोड्ने सम्भवतः एक मात्रै प्राविधिक हुन् हरि ।
हिरो–हिरोइनलाई एक झलक हेर्ने रहरले चलचित्र युनिटमा भाँडा माझ्ने काममा छिरेका हरि आज उनीहरुकै चलचित्र खिच्ने भए । चलचित्र खिच्ने मात्रै पनि होइन, उनीहरुलाई आफ्नो चलचित्रमा अभिनय गराउने समेत भए ।